Noocyada tababarka ee leh culeyskaaga | Ragga Stylish
Noocyada tababarka ee leh culeyskaaga
Ragga Stylish | | Ku habboon, Fitness
La calisthenics, sidoo kale loo yaqaan miisaanka jirka, waa nooc ka mid ah tababar isticmaalaya culeyskaaga si loo xoojiyo muruqyada iyadoo ay ugu wacan tahay iska caabbinta jirka ee culeyska. Taas macnaheedu waxa weeye in aan loo baahnayn in jimicsiga la aado ama loo isticmaalo qalab qaab ahaan loo qaabeeyo; Tababarkan waxaad ku sameyn kartaa guriga waxaadna ka heli kartaa waxtarro la mid ah sidii aad ku tagtay qolka jirdhiska. Ku habboon kuwa hadda bilaabaya tababarka, calisthenics waxay ka caawisaa inay ogaadaan xaaladdooda jireed iyo xaddidaadaha ay ku gaari karto horumarka sida jimicsiga la sameeyo. Waa maxay noocyada tababarka ee lagula taliyay in lagu tababaro qaabkan?
1 Noocyada tababarka
2 Faa'iidooyinka Calisthenics
Jirka shaqeyn kara kooxo muruqyo badan Iyada oo loo marayo noocyo kala duwan oo tababar ah iyo noocyo kala duwan ayaan kaliya sii hayn doonin xiisaha aad u qabto jimicsiyada, laakiin sidoo kale waxay gacan ka geysan doontaa jadwal dhammaystiran oo dhammaystiran. Marka, waad ogaan doontaa cilladahaaga waxaadna ka shaqeyn doontaa inaad ka gudubto iyaga oo ku horumaraya tababarkaaga.
Ku adkaatay waxay shaqeeyaan lafdhabarta, muruqyada dambe iyo gacmaha. Asal ahaan, waxay u baahan yihiin in jirka kor loo qaado iyadoo la adeegsanayo baarka iyo gacmaha laftooda. Jimicsiga noocan ahi waa mid ka mid ah kuwa ugu adag in la barto, sidaa darteed waxaa lagugula talinayaa inaad ka bilowdo soo-jiidashada dabiiciga ah ee kuu oggolaanaya inaad dhammaystirto farsamada ka dibna aad u sii kordhiso dhibaatada. Intaas waxaa sii dheer, soo-jiidashada waxaa lagu dari karaa howlo kale oo dhabarkaaga ka shaqeeya oo tababarkaaga ku siiya noocyo badan. Qaar ka mid ah beddellada ugu fiican ee garka-garka iyagu waa pullover dumbbell iyo pulley saf.
En fadhiidka waxay shaqeeyaan cirridka, caloosha iyo lugaha. Sida garka-kore, waxaa lagama maarmaan ah in la barto farsamada si loo helo dhammaan faa'iidooyinkeeda; Maqaatigu wuxuu hagaajiyaa dabacsanaanta jirka wuxuuna caawiyaa kahortagga dhabar xanuunka. Joogitaanka wanaagsan iyo culeyska culeyskaaga oo culeyskaaga la saaro ayaa fure u ah barashada layligan. Marka farsamada la barto, waxaad u gudbi kartaa noocyo isku dhafan oo adag, sida Bulgaariya.
Riix-riix shaqee gacmahaaga iyo jirkaaga kore. Waxaa muhiim ah in la ogaado in, si sax ah loogu sameeyo, jidhku waa inuu iswaafajiyaa waana inaad adkeysaa caloosha. Mar alla markii aad baratay riixitaanka aasaasiga ah, waad kordhin kartaa dhibkooda adoo gacmahaaga dhigaya meelo kala duwan, oo xitaa aad ku fulin karto hal gacan riixitaan.
Imtixaanka Burpee wuxuu shaqeeyaa jirka oo dhan wuxuuna hagaajiyaa adkeysiga muruqyada maadaama ay uruuriso dhowr nooc oo jimicsi ah. Maaddaama ay tahay jimicsi isugu jira fadhiisimo, riixitaanno iyo boodbood toosan, waxaa lagugula talinayaa inaad marka hore barato farsamooyinkan kahor intaadan isku deyin inaad sameyso, adoo la qabsiinaya xoogga xaaladdaada jireed.
Si loo helo dhammaan faa'iidooyinka calisthenics, waxaa lagama maarmaan ah in la ilaaliyo qaab-dhismeedka jirka oo wanaagsan isla markaana la beddelo jimicsiga jimicsiga. Faa'iidooyinka ugu waaweyn ee tababarka noocan ahi waa kuwan soo socda:
Waxay ka hortagtaa dhaawacyada maaddaama jidhku awood u leeyahay inuu sameeyo jimicsiyo aad u kala duwan oo, oo ka duwan waxa ka dhaca goobta jimicsiga, aad u firfircoon.
Waxay dhiirrigelisaa dabacsanaanta taas oo, iyo waxyaabo kale, u oggolaanaysa jimicsiyo murugsan oo sii kordhaya.
Caawinaad xakamee jirka kana gudub xaddidnaantaada.
Calisthenics waa jimicsi isticmaala miisaankaaga si aad jimicsi ugu sameyso jirka. Jiid-jiido, fadhiisimo, riixitaanno, iyo baaritaanka Burpee waa noocyo jimicsi ka mid ah oo dhiirrigeliya dabacsanaanta, gubidda kalooriyada, kana hortagga dhaawaca. Tababbarka noocan ahi wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ogaato jirkaaga iyo xaddidnaantiisa laakiin, aasaasiyan, ka gudub caqabadahaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Noocyada tababarka ee leh culeyskaaga
Sida loo diyaariyo aroos
Ragga ugu xiirista badan jirka ragga